Wararka Maanta: Khamiis, Aug 9 , 2012-Mid ka mid ah Odayaasha soo xulaya Xildhibaannada Cusub oo sheegay in lagu diiday Xildhibaanno uu soo xulay
Ugaaska ayaa sheegay in markii uu u geeyay guddiga farsamada xildhibaanadii uu soo xulay loo sheegay in xubin ka mid ah xildhibaannada uu qoray suldaan beesha ka mid ah, isagoo xusay in markii uu waydiiyay sababta loo sheegeen in guddiga khilaafaadku ay arintaa soo qoreen.
"Guddiga farsamada ninka ay suldaanka ku sheegeen ma ahan mid jira," ayuu yiri Ugaaska oo intaas ku daray: "'Go’aanka guddiga khilaafaatka wuxuu kasoo horjeedaa nidaamka lagu heshiiyay in lagu soo xulo xildhibaannada oo ah in 135-ka duub ee Soomaaliyeed ay soo xulaan xildhibaanada, beesheydana anigaa ugu jiro."
Sidoo kale, ugaasku wuxuu ku eedeeyay guddiga farsamada inay si sharci darro ah u sameeyeen arrintaas; waxayna meel ka dhac ku tahay xushmada iyo qadarinta ay leeyihiin duubabka dhaqanka Soomaaliyeed.
"Aniga iyo beeshaydu waxaan kasoo horjeednaa faragelinta lagu sameeyo xubnihii aan u xulannay inay beesha ku matalaan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya," ayuu yiri Ugaas C/raxmaan Xaaji.
Ugu dambeyn, ugaasku wuxuu ku sheegay qoraal in guddiga farsamada ay dusha u ridan doonaan wixii cawaaqib xumo ah ee ka yimaado falka lagu sameeyay oo ah mid sharciga aan waafaqsanayn.